कोरोना भाइरसको असर कुन देशमा कति? (तालिकासहित) - लण्डन काठमाडौँ
बिश्व समाचारMarch 6, 2020
कोरोना भाइरसको असर कुन देशमा कति? (तालिकासहित)
विश्वका विभिन्न देशहरूमा कोरोना भाइरस फैलिँदैछ। यसरी कोभिड-१९ भनिने नोबेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएका देशको सङ्ख्या ६० नाघेको छ। विश्वभर झण्डै ९० हजार जना यस भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन्।
सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण चीनमा देखिएको छ। चीनमा पहिलोपटक सन् २०१९ को अन्त्यमा यस भाइरसको सङ्‌क्रमण देखिएको थियो।
हाल यस भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८० हजार ४०९ पुगेको छ भने यसै सङ्क्रमणका कारण ३ हजार १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसमा हङकङमा देखिएको १०५ जनामा र मकाउमा १० जनामा देखिएको सङ्ख्या पनि सम्मिलित छ।
सङ्क्रमितको सङ्ख्या चीनमा दिनानुदिन कम चाहिँ भइरहेको छ र यो प्रायः हुवेइ आसपासमा मात्र रहेको छ। हुवेइमा मात्र कम्तीमा ६७ हजार ३३२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ।
हाल यस भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८० हजार ४०९ पुगेको छ भने यसै सङ्क्रमणका कारण ३ हजार १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
दक्षिण कोरियामा ६ हजार ८८ जनामा कोरोनभाइरस देखिएको छ। दक्षिण कोरियामा ४० भन्दा बढीको यस भाइरसबाट मृत्यु भइसकेको छ।
त्यस्तै, इरानमा ३ हजार ५१३ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। यस भाइरसका कारण इरानमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०७ पुगेको छ।
इटालीमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सङ्ख्या तीन हजार ८९ पुगेको जनाइएको छ भने यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०७ पुगेको छ। इटालीका पनि केही सहरहरू बन्द गरिएका छन्, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव तथा कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन् भने पर्यटन व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ।
इटालीले सबै विद्यालय र विश्वविद्यालय १५ मार्चसम्मका लागि बन्द गरेको छ।
जर्मनीमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३ सय ४९ पुगेको छ। युरोपमा इटालीपछि सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको जर्मनीमा हो।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा १ सय ५० भन्दा बढीमा भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। बुधबार क्यालिफोर्नियामा एक ७१ वर्षीय वृद्धको मृत्युसँगै अमेरिकामा यस भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुगेको छ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको समुद्री तटनजिकै ग्रान्ड प्रिन्सेस पानीजहाजमा सवार ३५ सय जनालाई होल्डमा राखिएको छ।
स्वीट्जरल्याण्डमा कोरोनाभाइरसबाट एक ७४ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भएको छ। यो स्वीट्जरल्याण्डको पहिलो यस्तो घटना हो। त्यहाँ ९० भन्दा बढी कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित रहेका छन्।
संयुक्त अधिराज्यमा पनि ९० जनामा यसको सङ्क्रमण देखिएको छ। इङ्‌गल्याण्डमा ८०, स्कटल्याण्डमा ६, वेल्समा १ र उत्तरी आयरल्यान्डमा ३ गरी संयुक्त अधिराज्यमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण ९० जनामा पुगेको हो।
अस्ट्रेलियामा ५५ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ।
भारतमा ३० जनामा यस भाइरसको सङ्क्रमण भएको बताइएको छ। यसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित पुष्टि भएका १६ जना इटाली नागरिक पनि रहेका छन्।
बिहीबार इराकमा कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३ पुगेको छ। इराकमा यसै साता मात्र ३६ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको हो। यो सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने बताइएको छ। इराकको स्वास्थ्य प्रणाली अव्यवस्थित रहेका कारण यसले थप असर पुर्‌याउनसक्ने जनाइएको छ।